Gaaffii ministirri muummee Abiy Ahimed Federeshinii ispoortii lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa irratti argamaniif karaa imbaasitiin dhiyeetera. - BBC News Afaan Oromoo
Gaaffii ministirri muummee Abiy Ahimed Federeshinii ispoortii lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa irratti argamaniif karaa imbaasitiin dhiyeetera.
29 Caamsa 2018
Image copyright FERRANTRAITE
Goodayyaa suuraa Daalaas fi suuraa kubbaa
Feestivaala ispoortii fi aadaa lammilee Itoophiyaa Ameerikaa kaabaa jirataniin waggaa waggaan qophaa'u yeroo 35ffaaf bara kana ni kabajama. Ministirri Muummee Abiyyi Ahmad qophicha irratti argamuun haasawa taasisuuf karaa imbaasii biyyatti Ameerikaatti argamutiin gaaffiin dhiyaateera. Miseensota Waldaa Ispoortii kana irraa mormiin dhagahamaa jira.
Hariiroon Federeshinii Ispoortii lammiilee Itoophiyaa Kaaba Ameerikaa fi Mootumma Itoophiyaa gidduu jiru baroota darban hedduuf gaarii hin turre. Waltajjiiwwan ispoortiis mormii mootummaa Itoophiyaarraa qaban waltajjiiwwan irratti ibsan keessa tokko.
Feestivaal Ispoortii Federeeshinichi bara kana qopheesse kanneen Kanaan duraa irra kana adda taasisuu danda'a Xalaayaan jedhame tokko Federeshinicha qaqqabeera.
Dura taa'aan Federeeshinichaa obbo Abiy Nuurilign, ''gaaffichi waajjira ministera muummeerraa ykn nuti gaafannee osoo hin taane imbaasii itoophiyaa Waashington DC ti argamu irraati kan dhufe.karaa Ambaasadara biyyattii ministirri muummee waltajjicha irratti argamuu waan barbaadaniif osoo argamanii hoo jechuun deeggarsa gaafataniiru.Xalayaa waanuma kana ibsu federeeshinichaaf erganiiru,''jedhan.
Qabiyyeen Xalayaa Embaasii Ameerikaan Federeshinichaaf barreefame erga beekamee booda akkamiin dhimmicha ilaaluun danda'ama kan jedhu lammiilee Kaaba Ameerikaa jiran dubbachiisaa jira.
Tideeg Boonsaa hiriirota mormii Kaaba Ameerikaatti taasifaman hedduu keessatti qooda fudhachuun beekamti.
Ministirri Mummee Itoophiyaa Feestivaala Ispoortii kana irratti argamuun isaanii gaaffii qabnu gaafachuufis ta'e deebii isaanii caqasuuf waltajjichi mijitaa miti jechuun mormiti.
''Dr Abiy osoo galma wayii qabaatanii hawaasa dubbisanii wajjin mariyatan homaa rakkoo hin qabu ture.amma kan tahuu garuu keessumaa kabajaa tahuunistaadiyoomiitti argamuun namoota kumaan lakkaawamanachitti argamaniif haasaa daqiiqaa 20 taasisu.daqiiqaa 20 keessatti gaaffiin keenyas gaaffii hin tahu deebiinis nuuf hin kennamu'' jetti.
Faallaa Kanaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa duraanii kan turan Obbo Girmaa Seeyfuu qaamni Federeeshinii fi hawaasa kanaaf beekmatii kennee dhufuuf balbala ufii banuun gariidha jedhanii amanu.
''waggota 35 keessatti hanga ammaatti hogganaan biyya tokkoo dhaaba kanaaf beekamtii kenneefii akka qaama tokkootti ilaale hin jiru.Yoo akka qaama beekamtii qabu tokkootti nu ilaalu tahe qaama itoophiyaa humna qabu tokko jedhanii keessummeessuf banaa of gochuun gaariidha'' jedhan.
Feestivaala ispoortii fi aadaa waggaa waggaan qophaa'uu fi baranas si'a 35ffaf magaala Daalasitti waxabajjii 24-30 qophaa'u kana mootummaan Itoophiyaa waltajjii siyaasaa mootummaa mormuudha jechuun laffisuuf hojjechaa ture jechuun warren komatan jiru.
Dura taa'aan Federeeshinichaa murteen bor ni dabarfama jedhamee eegamu maalis ta'u maal waltajjii waan dabaa itti mormamuu fi sagalee jijjiiramaa ta'uun isaa akka hin oolle dubbatu.
Itoophiyaan niwukilara fayyadamuuf waliigaltee haaraa mallatteessite
Loltoonni Naayijeriyaa garee gargaarsaa cufsiisan
'Ani warra du'aniif sagaleedha'
Sanyiin qamadii dagalaa wabii nyaataaf abdii ta'uu mala jedhame
Waggoota miliyoona lama dura da'umsi 'kan ammaarra salphaa' ture